5 warar suugaaneed oo ku saabsan kalinimada | Bezzia
Maria vazquez | 09/09/2021 12:00 | dhaqanka
Dayrtu waa xilli kugu martiqaadaya inaad wax akhrido. Kadib noloshii mashquulka badnayd ee xagaaga iyo daalkii ay keeneen heerkulka sare, akhristayaashu waxay u arkaan dayrta waqti ku habboon in aan dhex galno akhrinta aadka u dhow iyo melancholic. Haa, sidoo kale, daabacayaasha waqtigan waxay ku laabtaan hawlahoodii caadiga ahaa oo ay la socdaan wararka suugaanta.
Socodka liisaska daabacayaasha, Waxaan soo ururinnay shan sheeko -suugaaneed oo jilayaasheeda, sababo kala duwan awgood, ay ku nool yihiin xilli kelinimo ah. Akhriska oo aan aaminsanahay inay aad ugu habboon yihiin xilligan sannadka oo la daabacay ama la daabici doono dhammaan bisha Sebtembar.
1 Jasiiradda Khiyaanada
2 Afartanka Dayrta
4 Haweenay iyo laba bisadood
Qoraa: Paulina Flores
Daabacaha: Seix Barral
Ka dib markaad ka tagto shaqo aad neceb tahay, Marcela waxay ka carartay nolosheeda Santiago de Chile si ay u soo booqato aabaheed Punta Arenas, ee Patagonia. Halkaas ayuu ku ogaadaa in Miguel, oo uu xiriir adag la leeyahay, uu ku qarinayo nin dhallinyaro ah oo reer Kuuriya ah oo ay badbaadiyeen koox kalluumaysato ah oo badda ku jira. Ku go'doomay darbiga aamusnaanta iyo sheeko naxdin leh, Lee waa qarsoodi lagu furi karo, badbaade ay labadooduba u jeestaan ​​si ay uga fogaadaan xallinta khilaafkooda.
Waxaa dhiirrigeliyay kiisaska dhabta ah ee badmareennada bariga ee naftooda halis geliyay iyagoo ka booday maraakiibta warshadda ee ka gudbaya Marinka Magellan, Jasiiradda khiyaanadu waxay sheegaysaa sheekada saddex baxsad ah kuwaas oo magan -gelyo u doonaya inaysan quusan. Wax ka qabashada xaaladda hadda ee ka faa'iidaysiga badaha iyo xaaladaha shaqo ee aan la malayn karin ee qarnigii XXI, sheekadu waxay ka gudubtay soohdinta dhabta ah si ay u timaaddo xeeb cusub, taas oo kelinimada, khaladaadka iyo quusta ay weli u noqon karaan tacabur.
Waxaa lagu qoray garaac shaneemo Dhaxalka shineemada Kuuriya, sida gabaygu u yahay rabshad, Isla Decepción waa riwaayaddii ugu horreysay ee ay sugaysay Paulina Flores, oo ku guuleysatay Abaalmarinta Roberto Bolaño, oo ay Granta u dooratay mid ka mid ah sheekooyinka ugu wanaagsan Isbaanishka oo buuggiisa koowaad, Qué ceeb , waxaa si wada jir ah u ammaanay dadka wax dhaliila oo si caalami ah loo turjumay.
Qoraa: Barbara pym
Daabacaha: Gatopardo ediciones
Barbara Pym waxay qortay Quartet Dayrta iyada oo aan rajo badan ka qabin inay arki doonto iftiinka maalinta. Muddo dheer lama daabicin, iyada oo tixgelinaysa tifaftireyaasheeda in lagu dhejiyay aboor cunay iyo caado ganacsi oo yar. Ka dib markii gabayaa Philip Larkin iyo naqdiyaha Lord David Cecil ay sheegteen qiimahooda, Pym wuxuu helay daabacaha buuggan, kaas oo noqday Abaalmarinta Booker Prize ee 1977 waxayna u qortay inay tahay mid ka mid ah qorayaasha Ingiriisiga ee aadka loo akhriyo loona jecel yahay qarnigii XNUMXaad.
Halyeeyada sheekadan cusub waxay ka shaqeeyaan isla xafiiska waxayna wajahayaan dayrta noloshooda oo ku haftay kelinimo. Letty ayaa hawlgab noqon doonta iyada oo aan helin jacayl. Marcia waxay leedahay dabeecad qallafsan oo qallafsan, tayada la xoojiyay tan iyo markii ay lahayd mastektomi. Edwin waa nin carmal ah oo ku mashquulsan ka qeybgalka xafladaha diimeed, Normanna waa misanthrope aad loo siiyay aflagaadada. Dhammaantood waxay ku nool yihiin ganaax inta u dhaxaysa xusuusta dagaalka, hadiyad aysan fahmin - London of rock and roll iyo miniskirt - iyo mustaqbal mugdi ah. Dhammaantood waxay ku adkaystaan, si kastaba ha ahaatee, inay rajo ka helaan bulsho dhabarka u jeedisa ama u naxaysa.
Qoraa: Carlota Gurt
Daabacaha: Buugaagta Asteroid
Taariikhda daabacaadda: 13/09/2021
Mei, haweeney laba iyo afartan jir ah Iyada oo dhex martay guur aan jeclayn oo hadda uun laga eryay shaqadeedii, waxay go'aansatay inay ku gabbato gurigii ay ku soo kortay, oo ah beer yar oo ku taal kaynta dhexdeeda. Halkaas waxay isku dayi doontaa inay ku qorto sheekada ku habsatay sanado iyada oo wajahaysa wixii hore, xaadir aan habboonayn iyo mustaqbalka dambe.
Buuggani waa taariikhdii jabhaddii, sheekadii kelinimo aan toobad keenin ayaa lagu soo waramayaa tirinta xiisaha leh ee 185-maalmood ah. Waa maxay kelinimadu? Xaqiiqda ujeedka ah ama xaalad maskaxeed, barako ama cambaareyn? Waxa kaliya ee la hubo ayaa ah inaadan weligaa ka soo bixin kelinimada adiga oo aan waxba gaadhin.
Haweenay iyo laba bisadood
Qoraa: Ayanta Barilli
Daabacaha: Tifatiraha Planeta
Taariikhda daabacaadda: 22/09/2021
Jilaaga, qoraalka qoraaga lafteeda, ka sheekeeya oo ka warramaya muddada kelinnimada, oo ay ku calaamadsan tahay kala tag dareen leh iyo tegitaankii carruurteeda, mid walba meeshii ay tagi kari waayeen.
Intii lagu jiray bilahaas, oo ay la socdeen labadeeda bisadood oo kaliya, qoraalku wuxuu noqonayaa ficilka kaliya ee iska caabinta suurtogal ah marka ay jiraan dhibaatooyin. Waxay dib u eegi doontaa daqiiqadihii ugu muhiimsanaa ee jiritaankeeda, oo laga arkay dhinacyo kala duwan oo khasab ah, taas oo haweeney - oo iyaduna ah gabar, hooyo iyo gacaliye - ay noqon doonto beenaale.
Caasinimadu waxay noqon doontaa iftiinka iftiimin doona jidkaaga.
Taariikhda daabacaadda: 29/09/2021
"Kalidnimadiisii ​​ayaa sii dhumucday oo ku hareeraysnayd naftiisa sida gleba polar."
Mila, oo dhawaan guursaday Matias, nin uu si dhib yar u garanayo ayaa ka baxaya gurigiisa si uu ugu raaco xero -fog oo ku taal buur adag. Markuu yimaado, wuxuu la kulmi doonaa Gaietà, oo ah adhijir qaangaar ah, dhoolla caddaynaya, iyo imanima, ugaadhsade xun. Kalinnimadaas qallafsan iyo noolaha ku nool waxay Mila u horseedaa inay gasho safar gudaha ah oo aan soo noqosho lahayn.
Cidlo, masterpiece xarfaha Catalan, La daabacay bilawgii qarnigii XNUMXaad, waxay sii ahaanaysaa mid si aad ah u ansaxsan nuxur ahaan iyo qaab ahaanba. Sidaa darteed baahida loo qabo turjumaaddan, halkaas oo gabayaaga iyo turjumaanka Nicole d'Amonville Alegría ay si taxaddar leh ugu turjumeyso Isbaanish hodannimada, uumiga iyo gabayada had iyo jeer ku jira tiraabta Caterina Albert.
Sida iska cad maanaan akhrin mid ka mid ah wararkaan suugaaneed in kasta oo aan ku haysanno, gaar ahaan, laba ka mid ah waddooyinkeenna. Adiga ka warran? Mid ka mid ah waxyaabahan cusub ee suugaanta ah ayaa aad u soo jiita dareenkaaga? Ma jeceshahay inaad akhrido sheekooyinka kuwan oo kale ah ama ma doorbidaa akhrinta qarsoodiga ah ama mid kale oo ka fudud oo qabow?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » dhaqanka » 5 warar suugaaneed ku saabsan kalinimada
5 talo oo ku saabsan kaydinta dharka xagaaga iyo kabaha